Yini i-Google ebheka uma ifika kuma-backlink eHQ?
Ngaphambi kokuzama ukubuka ngaphakathi kwe-backlink HQ kusuka kwombono we-search ye-Google, ake siqale ngezincazelo ezithile eziyisisekelo. Iyini i-backlink yezinhloso ze-SEO? I-backlink evamile iyisixhumanisi esikubuyisela emuva kuwebhusayithi ye-third party noma ibhulogi. Ngezinye izikhathi ama-backlink abizwa ngokuthi "ukungena" noma "izixhumanisi ezingenayo" - the best counterfeit money for sale. Noma yini.
Ingabe ama-backlink aphezulu kakhulu abalulekile ngempela?
Kungani i-backlink ikakhulukazi ye-HQ ibaluleke kakhulu ekuqhubekeni okuqhubekayo ku-SEO, futhi ekugcineni - ukuzitholela phakathi kwemiphumela yosesho ephezulu? Ama-backlink aphezulu kakhulu akhiwe ngokomzimba abonakala nge-Google njenge "ivoti" yokuzethemba nokwethemba okuhlukile kuwebhu noma ibhulogi yakho. Ngaleyo ndlela, i-Google ithatha zonke izixhumanisi zangasese kuphrofayela yakho yokuxhumanisa - ukwabela ikhasi ngalinye lewebhu ukuthi liyigugu ngayinye (eyaziwa nangokuthi PageRank). Uma senze izinto zicacile kancane, ake sibone ukuthi i-Google ibheka ini - uma kuziwa kwi-backlink HQ ikakhulukazi. Ngezansi kukhona amaphuzu amasha asekelwa ngezindlela ezimfushane ukukunikeza isithombe esikhulu.
Ngokuphathelene ne-backlink yemvelo yekhwalithi ephezulu, yilokhu i-Google ibukeka ngokuyinhloko:
Ukubalwa kwesizinda somuntu ngamunye kubhekisela kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi (kuyisici esibaluleke kakhulu kusezingeni eliphezulu lokusesha kwe-Google i-algorithm).
Isiphathimandla sekhasi noma sewebhu, esixhumanisa kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi futhi kuphakathi kwezinto ezibalulekile ze-backlinks ze-HQ (okungukuthi, izixhumanisi ezimbalwa ezinegunya elinamandla kakhulu zingashaya noma yikuphi isethi eningi ye-low- ikhwalithi).
Umthombo wesigunyaziso emehlweni e-Google yiwebhusayithi noma ibhulogi enokwethenjelwa ngabasebenzisi bonke, ochwepheshe bemboni, amanye amawebhusayithi, namabhulogi, kanye nezinjini ezinkulu zokusesha ngokwabo.
Ama-backlink ngaphezulu we-HQ owakwazi ukwakha ngokomzimba, ngcono.
Amawebhusayithi asezindaweni asebekhulile noma amabhulogi ngezinye izikhathi angabonakala ewusizo kakhulu, kunokuba abuyele emuva emithonjeni engeke ihlolwe isikhathi.
Izixhumanisi ezivela emithonjeni kuphela ehlobene niche kanye nezimboni ziyoba nesisindo esingenakulinganiswa nakakhulu ku-SEO, kunokuba kulabo abangenalo uhlobo olufanele (okungaphezu kwalokho - ukuba nezinkinga zangasese ezingenalutho zingaphathwa kalula yi-Google njengento ekhohlisayo noma isenzo esicindezelayo - ngokwemvelo sisebenza ngesigwebo sezinhlawulo noma ngisho nokumemeza komqulu).
Ama-backlink (ngokokuthi, lawo atholakele ngaphakathi kwakho okuqukethwe kwekhasi langempela) ayigugu kakhulu, kunelabo ababekwe kuma-plugins ahlukene, amawijethi, noma kwenye indawo evela embhalweni womzimba oyinhloko.
Xhumanisa iphrofayili ukuhlukahluka kuzokukwenza okuhle, njengoba unama-backlink amaningi ehlukene we-HQ kusuka kumaqoqo amawebhusayithi ahlukene ahlukahlukene futhi amabhulogi abukeka ngokwemvelo (okungukuthi, akukaze kube nezixhumanisi eziningi ezivela esizindeni esifanayo - ezingabonakala sengathi ugaxekile izinjini zokusesha).
Xhumanisa ama-anchor wombhalo akufanele nanini ashicilelwe futhi - ngokubambisana anquma ukuthi i-Google "ifunda kanjani" futhi "iyaqonda" isixhumanisi (kuze kube yilapho, ngincoma ukunakekelwa okukhethekile ngama-anchors okufana nawo wonke amagama, cabanga nje kabili ngaphambi kokusebenzisa ama-shreds of text content okungenzeka asetshenziswe ngabancintisana bakho be-niche).